Mgbọrọgwụ Huawei P9 Lite na 7.0 Nougat | Gam akporosis
ndabara | | Gam akporo Root, Huawei, Nkuzi, Gam akporo nsụgharị
Ezigbo mma androids, oge a ka m bịara ịkụziri gị ihe kedu gbue gam akporo na Huawei P9 Lite na gam akporo Nougat (7.0) n'ụzọ dị mfe ma dị irè.
Ebe ọ bụ na ahụtụbeghị m nkuzi na Spanish banyere otu esi agbanye ụdị nke gam akporo ọhụrụ a, taa, m na-aga n'ihu ịme otu ebe m na-akọwa nke ọma usoro ịgbaso. N'ihu ọkwa na Usoro a adịghị mgbagwoju anya ma ọ bụrụ na agbasoro usoro ndị akọwapụtara. Ka anyị bido!
1 Ịdọ aka ná ntị
2 Rịọ koodu gị
3 Kwado ndị nrụpụta
4 Mepee bootloader gị
5 Flash mgbake
6 Budata Checker Checker n'efu na Playlọ Ahịa Google
Gbaso usoro a gụnyere ihe egwu, site ugbu a gaa n'ihu m na-ekwu na ọ bụrụ na agbasoro nkuzi nkuzi a site na ntụpụ ụkwụ agaghị enwe nsogbu. Ma mụ onwe m ma ọ bụ Androidsis bụ maka nsogbu ndị ị nwere ike ibute na njedebe gị.
Mgbe ị na-akpọghe bootloader anyị tufuru nkwa ahụ, yabụ ana m akwado ịme ya mgbe anyị na-apụ na ya.
Tupu ime ihe ọ bụla, gbalịa ime nkwado ndabere ebe ọ bụ na usoro ndị a eme nrụpụta ụlọ ọrụ ma hichapụ data niile sitere na ebe nchekwa dị n’ime.
Rịọ koodu gị
para rịọ koodu anyị ihe anyi ga eme bu iga na peeji nke hapuru ebe a, ọ ga-achọ ka anyị debanye aha anyị iji rịọ ya, pịa Budata site na ntaneetị na saa ara na ɛte Kpọghe Bootloader. Na usoro a:
Nọmba nlereanya. (Enwere ike ịchọta ya Banyere ekwentị. Mkpa: Tinye Huawei VNS-LXX, niile na nnukwu okwu ya mere enweghị esemokwu)
Nọmba usoro n'usoro. (Enwere ike ịchọta ya na ekwentị> Ọnọdụ)
IMEI. (Ọ na-enweta site na ịpị na dialer / nomba ahụ igodo 06 #, ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na ibe mgbe ị na-abanye IMEI ma ị nwere sim sim, buru ụzọ nwaa otu ma ọzọ)
NJ ngwaahịa. (Ọ na-enweta ya na koodu a * # * # 1357946 # * # *)
(Ozugbo inwere koodu ọnụọgụ 16, detuo ya ma debe ya n'okpuru mkpọchi na igodo)
Gaa na nhọrọ ndị nrụpụta (Banyere ngwaọrụ> Pịa ọtụtụ ugboro na nọmba ụlọ ahụ). Lelee igbe maka OEM lokpọghe na USB debugging, Nzọụkwụ a dị mkpa ebe ọ bụ na ị nwere ike ịhapụ njedebe gị enweghị ike iji rụọ ọrụ, ọbụlagodi ịnwe ya na onye ọrụ ntanetị. Imirikiti brickeos bụ maka enweghị ọrụ ndị a.
Pịa na Banyere nke ekwentị
Pịa ọtụtụ ugboro na nọmba ụlọ ahụ na Mmepụta nhọrọ ga-nyeere
Anyị na-enweta Mmepụta nhọrọ
Anyị na-eme ka mkpọghe OEM na nbugharị USB
Ugbu a, anyị nwere ike ịga n'ihu ịmeghe bootloader anyị maka oge ọzọ Flash mgbake ma wụnye mgbọrọgwụ.
Mepee bootloader gị
M na-ahapụrụ gị onye na-akwọ ụgbọ ala nke na-akwọ ụgbọala, ihe na-akpọghe, mgbake + Root (ekele Eloy Gómez na ndị ọrụ ibe si XDA).
Wepụ faịlụ ndị dị na folda ị nwere n'aka, anyị na-eme windo iwu na anyị na-etinye ndị ọkwọ ụgbọala na HiSuite, anyị na-agbaso ntuziaka ndị egosiri na njikwa njikwa. Ga-ajụ anyị banye na ngwa ngwa fastboot, anyị gbanyụọ ọdụ anyị, ozugbo ịpị Mpịakọta- wee jikọọ ọnụ anyị na pc. (Ọ bụ ihe dị omimi, ee, mana nke ahụ bụ etu ndị ọrụ nhazi Kirin 650 si eme.)
Mgbe ị na-abanye koodu mmeghe anyị, ọnụ ga-egosi windo dị ka ọ dị, anyị na-agagharị na EE na bọtịnụ olu + ma kwenye na bọtịnụ ike. Ọ ga-arụ nrụpụta ụlọ ọrụ na-akpaghị aka ma reboot.
Ugbu a oge ọ bụla anyị malitere ọdụ anyị, ọbụlagodi mgbe ị gbasịrị mgbọrọgwụ, ihuenyo ịdọ aka na ntị ahụ ga-apụta, na-achọ ịgwa anyị nke ahụ ọnụ anyị nwere agbachi bootloader, pịa Ike na ekwentị ga-amalite nke ọma.
Ozugbo a kwadoro ọnụ na njedebe, chekwaa faịlụ SuperSu 2.79 nke anyi weputara na zip na SD na ebe nchekwa dị n’ime a bụrụ na mgbake anaghị agụ anyị otu n’ime ncheta abụọ.
Mgbe ahụ, anyị ga-agbanye mgbake, anyị gbanyụọ ọdụ anyị ma bido ya na ngwa ngwa ngwa ngwa Dị ka anyị kwurula, n'ime folda mkpọchi ahụ pịa igodo Mgbanwe + Mgbanwe na bọtịnụ aka nri, mgbe ahụ na windo windo mepee ebe a
Iji mara ma pc anyị achọpụtala ọnụ anyị, anyị na-ede iwu na-esonụ: ngwa ngwa fastboot (ị ga - enweta nọmba serial gị)
Iji gbanye mgbake dee iwu na-esonụ: Fastboot flash mgbake twrp-3.1.0-2-hi6250 (Ọ ga-Flash na mgbake)
Ozugbo emere nke a, naanị ihe fọdụrụ ime bụ ka SuperSu 2.79 gbaa faịlụ site na iji Iweghachite na Anyị ga-enwerịrị ikike mgbọrọgwụ na Huawei P9 Lite na Nougat.
Anyị nwere ike ịlele ya site na nbudata na Storelọ Ahịa Play, mgbọrọgwụ Checker nke na-enyocha ma ọ bụrụ na anyị nwere ikike mgbọrọgwụ.
Budata Checker Checker n'efu na Playlọ Ahịa Google
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Mgbọrọgwụ gị Huawei P9 Lite na Nougat 7.0
Daalụ, ezigbo isiokwu na ọtụtụ nkọwa maka usoro dị ka nke a siri ike.
Ezigbo ọrụ Fran. Ọ bụ ezie na m na-achọ ịhụ gị na-eme na a video hehe. Know maara ihe m chere, ịmakụ gị.
raul okooko osisi dijo
Nnọọ . Ekele, nkuzi a zuru oke ma doo anya, a na-enwe ekele maka mbọ na nraranye
Zaghachi ka mmiri ghara ịga
Ekele si Mexico, nkuzi magburu onwe ya.
Ọkwọ ụgbọala apụrụ dijo
Nkọwa ziri ezi, isiokwu dị mma ma baa ezigbo uru
Zaghachi ndị ọkwọ ụgbọala ọzọ
Ndewo m chọrọ ịma ma ị nwere ike bulite ihe edeturu ma ọ bụ vidiyo nke otu esi eme mgbọrọgwụ + twrp na Doogee y6 Max. Daalụ
Daalụ nke ezigbo nkuzi mara nke ọma kọwara nke ọma na ekele maka enyemaka ị nyere anyị na otu androidsis
Ana m ekele gị nke ukwuu Francisco otu esi akọwacha nke ọma daalụ !!
Daalụ Francisco nke ọma kọwara ekele !!!
Ezigbo nkuzi, kọwara ọtụtụ nkọwa ka onye ọ bụla nwee ike ịme ya n'enweghị nsogbu. M na-atụ anya ọzọ isiokwu dị ka nke a. Daalụ nke ukwuu.
Ndewo, enwere m ike ịme usoro a ma ọ bụrụ na Huawei p9 lite na
Ndewo, ajụjụ m mgbe m hụrụ nkuzi niile bụ ma ọ bụrụ na agbachi bootloader ma gbanye mgbake iji gbanye mgbọrọgwụ ... Oge ọ bụla anyị malitere sel, akwụkwọ mmado anyị nwere ekpochila bootloader ga-apụta. Ebe ọ bụ na ọ na-ada iwe ma ọ bụrụ na m nwere akpaka ignitions on
Ndewo, enwere m nsọpụrụ 9 na mgbe m mepechara bootloader enweghị m ike ịwụnye mgbake n'ihi
Oem unlock na enweghị ike ịgbalite ya, amaghị m ma ọ nwere azịza, daalụ
Zaghachi francisco espinar aguilera
Ndewo, njikọ nbudata adịghị ebe ahụ, gịnị ka m kwesịrị ịme?
Zaghachi Pablo Esteban
I nwere njikọ nbudata, anaghị m ahụkwa ha
JOSE .S dijo
Ndewo ekele, ihe niile dị mma mana enweghị m ike ịga n'ihu na ntinye nke mgbagha n'ihi na ọ kpọghere OEM ọ dị ka ọpụpụ, ya bụ, enweghị m ike ịgbalite ya ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri nke ahụ.
Matías Ariagada dijo
Ndewo, ehihie ọma na afọ ọhụrụ afọ ọhụrụ, ịmalite afọ zuru ezu ekpebiri m ịgbanye ekwentị m, mana gịnị na-eme? Mgbe m rutere n’okporo “Unlock your bootloader” nke na - ekwu na ha hapụrụ onye na - etinye onwe ya, onye a nọghị, kedu ka m ga - esi wee jiri mgbọrọgwụ ya?
Zaghachi Matías Arriagada
Enweghị m ike ịchọta njikọ nbudata. Onwere onye nyere m aka biko?
Enweghị m ike ịhụ njikọ ahụ. Onwere onye nyere m aka biko?
Ebee ka njikọ njikọta dị?
Zaghachi Alejandro Robledo
Ebee ka m nwere ike ịhụ njikọ ahụ?
Ole ekwentị bibiri?
Ọtụtụ ekwentị bibiri gburugburu ebe a
M ga-ahapụ nke a ebe a, ọ bụ njikọ nbudata, eziokwu bụ ezigbo akwụkwọ ntuziaka mana njikọ ndị ahụ na-efu, ekele Juan Roberto Garcia na ibe m chọtara ya.
Zaghachi Gustavo E.
Ihe kachasị mma maka FaceTime maka gam akporo